होमपेज / शुक्रबार / यतै कि उतै?
यतै कि उतै?	07 Jul 2013 आइतबार २३ असार, २०७०
बजारमा उनले दिएको उत्तेजक चुम्बन दृश्य र कामुक नृत्यको विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। फिल्मको प्रचार गर्न खप्पिस निर्देशक मानिने उकेश दाहाल अभिनेत्री शशी खड्काका प्रत्येक दृश्यका तस्बिर मिडियाबाजीका लागि पठाइरहेका छन्। तर, यही फिल्म 'किन किन'को सुटिङ सकाएलगत्तै शशी सम्पर्कविहीन छिन्। त्यसैले निर्देशक दाहालले अचेल असाध्यै धेरै झेल्ने प्रश्न बनेको छ, 'शशी खोइ?' काठमाडौँस्थित पब्लिक युथ क्याम्पसमा बिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत शशी परीक्षाका लागि होस्टलमा बसिरहेको भनेर केही समय टारे। शशीले उनलाई पनि त्यसै भनेकी थिइन्। तर, परीक्षा सकिएपछि पनि शशी सम्पर्कमा आइनन्। अचेल उकेश जवाफविहीनमात्रै छैनन्, तनावमा पनि छन्। फिल्म रिलिज हुन डेढ महिना पनि बाँकी नभएको अवस्थामा मुख्य हिरोइन बेखबर भएपछि प्रचारमा समस्या आउने देखिएको साथीभाइलाई भनिरहेका छन्। तनावग्रस्त निर्देशक दाहालका लागि खुशीको खबर छ, शशी १५ दिनमा सम्पर्कमा आउनेछिन्। शुक्रवारसँग फेसबुक सम्पर्कमा आएकी उनले 'यो फिल्म करिअरको सवाल' भएको बताउँदै अबको १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउने बताएकी छिन्। अनलाइनमा उनले भनिन्, 'यो फिल्म हिट भएन भने मेरो अन्तिम फिल्म हुनेछ।' कता हो त? भन्ने प्रश्नमा उनको उत्तर थियो, 'यतैउतै।' उनी उतै (विदेशतिर) रहेको हल्ला बजारमा बाक्लै छ। यतैउतै भन्ने ठाउँको नाम नभएकाले उनी यतै छिन् कि उतै, खुट्याउन मुस्किल पर्‍यो। Tweet Leaveacomment Message *
नोबेलः पुरस्कार र प्रकरणस्विडिस वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेलले सन् १८९६ मा मृत्यु हँुदा २६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति छोडेका थिए। मृत्युअघि उनले विज्ञान र संस्कृतिका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने मानिसहरूलाई बर्सेनि पुरस्कार दिनू भन्ने...	किशोर कुमारका किस्सागायक, संगीतकार, अभिनेता, निर्माता र लेखक किशोर कुमारका अनेक रूप थिए। गायक र अभिनेताका रूपमा उनी बढी चर्चित थिए। संगीतको तालिमबिना नै बलिउड संगीतमा उनले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाए। हालै...	दुःखद दैनिकीप्युठानकी यामी मगर पद्यकन्या क्याम्पसमा बीबीएस पहिलो वर्ष अध्ययनरत छिन्। कक्षा कोठा चार तलामाथि भइदिँदा सुरुमा त उनको सातो गुम्यो। क्याम्पस प्रशासन र शिक्षकहरूसँगको लामो गलफतीपछि कक्षा कोठा त भुइँतलामा...	मञ्च–रंगमञ्च : रंगमञ्चमा विचारसाहित्यको विभिन्न विधामध्ये नाटक सशक्त विधा हो। विचार प्रवाह गर्ने अभिव्यक्तिको साह्रै सशक्त माध्यम पनि हो। विभिन्न समय कालमा नेपाली नाटकहरूले पनि विचार प्रवाह गरेका छन्। तर, विश्व साहित्यको अध्ययन...	कमलका आत्मामा केबल फ्यानहिजोआज भ्याइनभ्याइ छ है तपाइंलाई?हो नि। दशैँदेखि यस्तो भएको हो। रेकर्डिङ, कम्पोजिसन, कार्यक्रम सबैतिर भ्याउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ त दिमागै ह्याङ हुन्छ।	'जनताका दुःख गाउन थालेपछि मायाप्रेम भुलियो : रामेश श्रेष्ठघर मेरो ओखलढुंगा। जन्मेको पाल्पामा। बुवा सरकारी जागिरे। उहाँ जता जानुभयो उतै जान पाइयो। त्यसपछि डोटी, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, तेह्रथुम हुँदै ओखलढुंगा पुगेका थियौँ। रेडियो नेपालले आफ्नो जन्मजयन्तीका अवसरमा लोकगीत प्रतियोगिता...	घाइते फिल्मनेपाली फिल्मको उमेर ५० वर्ष भयो। यत्रो समय खाइसकेको फिल्मले फुल्न र फल्न भने जानेन। वर्षमा सय वटासम्म फिल्म बन्छन् तर चारपाँच वटाले पनि लगानी उठाउन सक्दैनन्। पुरानादेखि नयाँसम्म सबै...	शहीद (कविता)यो देश श्वेतभैरवको मुखबाट निस्कनेलुँ हिटी छोप्न चलिरहेको एउटा प्रतिस्पर्धाआँशु र अट्टहासको एउटा लाखे नाच जहाँ म जन्मनु नैक्रूरताहरूविरुद्ध एउटा प्रतिकार थियो।	शुक्रबार	अलिकति दोहोरी अलिकति फोहोरीकरिब दुई दशकअघि देशमा दोहोरी साँझको जन्म भयो । कुनै बेला दोहोरी साँझ गायन प्रतिभाका लागि...	पुलिसले किन मार्छ छापा?कुनै बेला प्रहरी कपाल पाल्ने र मुन्द्रा लाउने तन्नेरीको दोहोलो काढ्दै हिँड्यो। पार्क, पोखरी, मन्दिरतिर जोडी...	कस्तो मनोरञ्जन? कसको मजाक?गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्।...	मधेशीको सशक्त भूमिका उतार्न चाहन्थेँ : नाजिर हुसेनरंगमञ्च हुँदै फिल्ममा उदाएका अभिनेता हुन् नाजिर हुसेन। रंगमञ्चमा उनको नाटक हेर्न पुग्नेहरू उनलाई 'अभिनयको जादुगर'सम्म...	भर्खरै...